Jakey's Fork Homestead - Ikhabethe laseBunkhouse
Ingamamitha angamashumi amathathu nje ukusuka emfudlaneni we-trout ekhazimulayo, le Bunkhouse ebukekayo, engokomlando ihlanganisa umbhede wendlovukazi, ubhavu we-antique claw-foot oneshawa, indawo yokudlela encane, indawo yokuhlala, nosofa wokulala.
Umgodi wokucisha umlilo, i-hammock, nembobo yokubhukuda (kwabanesibindi!) kuzokugcina umatasa ngenkathi ujabulela i-R&R. Phuza ikhofi lakho kuvulandi futhi ujabulele ukushona kwelanga eduze komlilo wekamu obheke umfudlana. Abantu abaningi baye balingeka ukuba bahlale ihlobo lonke!
Ngenkathi ukwazi ukufinyelela i-Wi-Fi, lokhu okwenziwayo kufana nokuhlehla ngesikhathi. Ithuba eliyingqayizivele lokunqamula futhi uxhume kabusha likulindile ku-Jakey's Fork.
I-Dubois, i-Wyoming, eqhele ngamamayela angu-3 nje ukusuka emgwaqeni, iyidolobha elihle lasentshonalanga elinabantu abangaba ngu-1,500. Isitolo segrosa, izindawo zokudlela eziningi namabha, kanye nezitolo nezinsiza zomhlahlandlela ziseduze. Noma ungase uthathe isinqumo sokuhlala endaweni ujabulela i-ambiance emnandi ephansi komfula kanye nokudoba emanzini ahlanzekile e-Jakey's Fork.
Ngemva kweminyaka engu-15 ebhizinisini le-Bed & Breakfast, u-Carolyn ujabule kakhulu ukuncoma imisebenzi nohambo ezivakashini zakhe. Unolwazi nge-Dubois kanye nendawo ezungezile futhi uyakujabulela ukukusiza uhlele ukuvakasha okukhumbulekayo.
Ngemva kweminyaka engu-15 ebhizinisini le-Bed & Breakfast, u-Carolyn ujabule kakhulu ukuncoma imisebenzi nohambo ezivakashini zakhe. Unolwazi nge-Dubois kanye nendawo ezungezile fu…